🥇 ▷ Apple waxay daabacdaa a & # 039; ee & # 039; The Morning Show & # 039 ;, taxane aan ku arki doonno Apple TV + dayrtan ✅
Apple waxay daabacdaa a & # 039; ee & # 039; The Morning Show & # 039 ;, taxane aan ku arki doonno Apple TV + dayrtan
Si tartiib tartiib ah, Apple waxay shaaca ka qaadaysaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkeeda u gaarka ah ee ku saabsan adeegyadeeda cusub Apple TV + Munaasabadan, shirkadda waxay ku daabacday kanaalkeeda YouTube a shaaha dul Showgii subaxnimo, taxane ku saabsan show telefishan Mareykan ah oo subaxnimo. Kuwa mudaaharaadaya waa Reese Witherspoon, Jennifer Aniston iyo Steve Carrell, dhammaantoodna caan ku ah doorar kaladuwan.
Riwaayad majaajillo ah oo ku saabsan xirfadlayaasha wararka
Waxaa lagu sharaxay (taxanahan) sida muuqaalka gudaha ee nolosha dadka ka caawiya Mareykanka inuu tooso subixii, sahaminta caqabadaha dhabta ah ee soo food saaray haweenka (iyo ragga) oo fuliya dhaqankan telefishanka maalin kasta.
Showgii subaxnimo Waa mid ka mid ah wax soo saarkii lagu soo saaray cinwaanka hoosta “Apple Original” ee tufaaxa la qaniinay. Wax badan lagama oga dooddeeda, oo dhaafsiisan waxa lagu sheegay joornaalka Deadline dhawr sano ka hor. Sidii aan u sheegnay bilowgii, xiddigu waa dhex galayaa Witherspoon, Aniston iyo Carrell, halkaas oo labada ugu horreysa ay ku soo noqdaan si ay u wada shaqeeyaan ka dib markii tallaabada kooban ee Witherspoon ay ahayd walaasheed Aniston ee Saaxiibbada.
Muuqaalka hore ee aan ku arki karno waa istuudiyaha telefishanka halkaas oo wadahadallo kaladuwan lagu dhex geliyo dami. Waxay raacaysaa adduun aad u tartan badan, halkaas oo ay dagaalyahannadu ku dagaallamaan in ay ka qayb-galaan bandhigga subaxa hore.
Bari shaaha Waa mar labaad oo ay soo saartay shirkadda tufaaxa. Saddex toddobaad ka hor, Apple mid baa daabacay mid ku saabsan taxanaha Dadka oo dhan diiradda saaray sheeko kale ku saabsan loolanka booska si loo gaaro dayaxa iyo qabsashada booska. Waxaa la filayaa in Showgii subaxnimo ugu yaraan laba xilli oo waxaa la ogyahay in kan ugu horreeya yeelan doono toban dhacdo.
Apple TV + ayaa la sii dayn doonaa deyrtan, laakiin buugga daah-furista iyo qiimaha bil kasta ee adeegga lama yaqaan. Waxaan rajeyneynaa inaan helno faahfaahin dheeraad ah qeybta keydka bandhiga Sebtember soo socota ama, goor dambe, dabayaaqada bisha Oktoobar.
La wadaag Apple waxay daabacdaa ‘teaser’ ” The Morning Show ‘, taxane aan ku arki doonno Apple TV + dayrtan